Wasiirka Difaaca UK oo soo saaray qoraal dhaawacaya midnimada Soomaaliya, balse daqiiqado kaddib maxaa dhacay? - Latest News Updates
Wasiirka Difaaca UK oo soo saaray qoraal dhaawacaya midnimada Soomaaliya, balse daqiiqado kaddib maxaa dhacay?
Wasiirka Difaaca Boqortooyada dalka Ingiriiska Gavin Williamson ayaa soo saaray qoraal dhaawacaya midnimada dalka Soomaaliya, isagoona qoraalkiisa uga hadlayay booqashadiisii magaalada Hargeysa.
Qoraalkaan oo Wasiirku soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay inuu kulan la qaatay Madaxweyne Muuse Biixi iyo madax kale oo ka tirsan maamulkiisa Somaliland, isagoona sheegay in madaxda labada dal ay iska kaashanayaan arrimo badan.
Qoraalka Wasiirka UK ayaa noqday mid ay si weyn Soomaalida isugu dhaafsanayeen baraha bulshada, iyagoona sheegay in Dowladda Ingiriiska caddeysatay sida ay u dhaawaceyso midnimada iyo jiritaanka qarannimada dalka Soomaaliya.
Muddo 20-daqiiqo ah kaddib Williamson Wasiirka Gaashaandhigga Ingiriiska wuxuu bilaabay inuu dib u saxo qoraalkii uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, isagoona ku gaabsaday in madaxda Somaliland uu kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin taageerada ciidamada iyo qorsheyaal kale, wuuuna ka reebay ereygii ahaa “LABADA DAL”.
Wasiirka Gaashaandhigga Dowladda Ingiriiska oo isla shalay ka dhoofay magaalada Hargeysa ayaa booqasho ku maray dalalka Afrika sida Koonfurta Suudaan, Kenya iyo dalal kale, isagoo booqday xarumaha iyo goobaha ay leeyihiin hay’adda kaalmada Britain ee UKAID iyo saldhigyo ay ku sugan yihiin saraakiisha ciidamada dalkiisa.
Booqashada MP Gavin Williamson ee Somaliland ayaa ku soo beegantay xilli dowladda Ingiriiska ay aad uga carootay eryidii wakiilka QM u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya, isla markaana ku dhawaaqday inay joojineyso taageerada Dowladda Soomaaliya.